Apple dia mandefa ny beta fahatelo an'ny OS X 10.11.6 El Capitan | Avy amin'ny mac aho
Apple dia namoaka ny beta fahatelo an'ny OS X 10.11.6 El Capitan
Eny, maro amintsika no efa mifantoka amin'ny rafitra fiasa macOS Sierra vaovao, fa ny tena izy dia mbola ao El Capitan isika ary ireo tovolahy avy any Cupertino dia tsy manadino ny fanendrena azy ireo handefa ilay Ity no beta fahatelo an'ny OS X El Capitan 10.11.6.
Ity beta vaovao ity, toy ny tamin'ny andiany teo aloha navoaka, dia tsy mampiseho amintsika ny pitsopitsony momba izay nampiana, mainka ny mamaritra raha misy vaovao ao. Ny mazava momba antsika dia ny ho avin'ny ankamaroan'ny mpampiasa amin'izao fotoana izao macOS Sierra 10.12 ary ny sisa afaka miandry.
Apple dia mieritreritra ny hiala vonona nefa tsy misy tsy fahombiazana ity kinova farany fantatry ny OS OS El Capitan ity, ka rehefa manao ny dingana mankany amin'ny rafitra fiasa vaovao dia milamina ny zava-drehetra. Ny orinasa dia mbola tsy namoaka beta hafa ho an'ny macOS Sierra amin'izao fotoana izao fa tsy misalasala izahay fa afaka manao izany amin'ny fotoana rehetra.
Tsy maintsy mifantoka amin'ny fandaozana an'io OS X El Capitan 10.11.6 ankehitriny io isika, tsy misy olana, raha fintinina ary raha tsy misy fihemorana dia mety ho ny kinova farany farany ho an'ireo mpampiasa rehetra izay tsy manavao ny Macs. Matoky izahay fa ho an'ny ity kinova vaovao ity ho an'ny mpamorona tsy tafiditra dia mihoatra ny fanamboarana bibikely mahazatra sy fanatsarana ny fitoniana eo amin'ny rafitra, fa raha misy vaovao tsy manam-paharoa, havaozy anay amin'ity fidirana ity ihany.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Mac OS X » OS X El Capitan » Apple dia namoaka ny beta fahatelo an'ny OS X 10.11.6 El Capitan
juanjose dia hoy izy:
TSY hametraka ny «OS Sierra» aho noho ny antony 2, 1.- misy foana ny olana amin'ny kinova voalohany. 2.- Manana programa vitsivitsy izay tsy amidin'ny AppStore aho ary araka ny fahazoako «Sierra» dia tsy handefitra amin'ny fametrahana izay tsy avy amin'ny AppStore ka hijanona miaraka amin'ny kapiteny ny MacBook Pro ahy mandra-pahatongan'ny zavatra hafa.
Mamaly an'i juanjose
Miombon-kevitra amin'i Juanjose aho amin'ny loza mety hitranga amin'ny Apple OS vaovao, nametraka macOS Sierra tamin'ny milina virtoaly aho ary nanamarina fa tsy afaka mametraka programa ivelany amin'ny App Store aho, iray amin'izany MatLab, lozisialy ilaina amin'ny programa amin'ny sehatra maro. , midika izany fa tsy ho afaka hanavao ny OS vaovao aho.
Heveriko fa hadisoan'ny Apple ny nisambotra an'io, na dia takatro aza fa ataon'izy ireo hialana amin'ny tsy fahombiazana ateraky ny segondra.
Raha misy ny mpamorona ato amin'ity forum ity, dia mety kokoa raha mangataka terminal amin'ny Apple hametraka rindrambaiko ivelany
Valiny tamin'i Santiago
Peter Economy (@Petereconomy) dia hoy izy:
Eny, ny programa an'ny antoko fahatelo dia azo apetraka. Ny mitranga dia tsy dia miharihary izany. Ampidirinao amin'ny birao misy an'i Sierra ny programa, kitiho eo ankavanana ilay izy ary "sokafy" ary apetraka ny programa. Io no novakiako tato anaty forum. Holazainao amiko.
Valiny tamin'i Peter Economy (@Petereconomy)
eumac82 dia hoy izy:
Tsy afaka mametraka sierra aho satria nijanona tao amin'ny kapiteny ny mac, tsy maintsy nifindra monina tany amin'ny windows aho, be dia be ny vola lany amin'ny fampiasana windows indray
Valio i eumac82
Ahoana ny famindrana antso avy amin'ny Apple Watch mankany amin'ny iPhone
Fomba fampiasana ny elektronika DNI na DNIe amin'ny Mac